कसैलाई सर्पले टोक्यो? के गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता छन् टिप्स ! | OB Media
कसैलाई सर्पले टोक्यो? के गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता छन् टिप्स !
आवर बिराटनगर डटनेट | २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:३३
एजेन्सी- गर्मी महिनामा सर्पदंशका घटना निकै बढ्छन्। खासगरी नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। अमेरिकामा हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन्। तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।
अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा पीडा हुने, सुन्निने हुनुका साथै तन्तुहरुलाई क्षति पु¥याउँछन्। यसका साथै आन्तरिक रक्तस्राब पनि गराउँछन्। अमेरिकी चिकित्सकले सर्पले टोक्दा के गर्ने र के नगर्न भन्ने विषयमा केही सल्लाह दिएका छन्।
तत्काल इमर्जेन्सीमा गइहाल्नुपर्छ। टोकेको त्यति विषालु नभएपनि टिटानस र केही गम्भीर ब्याक्टेरियल संक्रमणको खतरा हुनसक्छ।
सकेसम्म टोकेको स्थानलाई अलि अलि भएपनि चलाउनुपर्छ, यसले विष अलि ढिलो फैलन मद्धत गर्छ।
सर्प कस्तो थियो भन्ने पनि याद गर्नुहोला। यसले चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग पुग्नेछ। सकेसम्म कुन स्थानमा टोकेको थियो भनेर पनि भन्नुहोला।
टोकेको समय पनि ख्याल गर्नुहोला। यसले कति समयअघि टोकेको थियो भनेर उपचार गर्न सहयोग मिल्छ।
कुनै गहना छ भने सुन्निनुभन्दा पहिल्यै निकाल्नुहोला।
आवश्यक पर्छ भने दुखेको कम गर्न टाइलेनोल (पारासिटामोल) लिनुहोला।
टोकेको क्षेत्रमा बेस्सरी नबाँध्नुहोला।
टोकेको ठाउँमा चिसो, आइस, तातो या कुनै पनि खालको मल्हम नलगाउनुहोला।
स्रोत : सीडीसी, अमेरिका
ओखलढुङ्गामा एक व्यक्तिको शव फेला , हत्याको आशंका
बिराटनगरमा निशुल्क होटेल म्यानेजमेन्ट कक्षा सुरु गर्दै नमस्कार होटेल